Real Madrid Oo Dooneysa Inay Iska Iibiso Seddex Ciyaaryahan Si Ay U Maalgeliso Qorshayaasha Xagaagan
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo dooneysa inay iska iibiso seddex ciyaaryahan si ay u maalgeliso qorshayaasha xagaagan
January 3, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay ku rajo weyn tahay inay iska iibiso Gareth Bale , Isco iyo Marcelo dhamaadka ololahan si ay u maalgaliyaan qorshahooda suuqa kala iibsiga xagaaga.
Bale, Isco iyo Marcelo ayaa dhamaantood qandaraaskoodu dhacayaa dhamaadka bisha June, waxaana la aaminsan yahay in bixitaankooda ay ku heli karaan 50 milyan ginni oo mushaharkooda ah, taasoo ka caawin karta kooxda inay si xor ah ugala soo wareegto Kylian Mbappe oo ay kaga soo qaateen Paris Saint-Germain .
Sida laga soo xigtay AS , Los Blancos ayaa go’aansatay inay waqti u qabato mustaqbalka Marcelo, halka Bale iyo Isco aysan sidoo kale ku jirin qorshaha kooxda, waxaana loo ogolaan doonaa inay beeca xorta ah ku baxaan.
Bale, oo weli ku maqan ka soo kabashada coronavirus, ayaa la rumeysan yahay inuu ka qaato £ 600,000 mushaharka Bernabeu todobaadkii, halka Marcelo loo maleynayo inuu qaato ku dhawaad ​​£ 250,000 todobaadkii.
Isco, ayaa la sheegay inuu qaato in ka badan £200,000 todobaadkii, waxaana lala xiriirinayaa inuu ku laabanayo Premier League, halka sidoo kale la rumeysan yahay inay jiraan kooxo Spain ka dhisan oo xiiseynaya saxiixiisa.
Real Madrid ayaa iyadu dooneysa in ay keenaan labada Mbappe iyo Erling Braut Haaland caasimada Spain inta lagu guda jiro xagaagan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.